Tantaram-Pitiavana Tsy Misy Oroka? Izany No Sinema Any Iran · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Febroary 2014 5:15 GMT
Vakio amin'ny teny Español, 日本語, فارسی, srpski, عربي, Français, Português, Ελληνικά, English
Ity Lahatsoatra ity dia tatitra amin'ny onjm-peo avy amin'i Shirin Jaafari ho an'ny The World nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 13 Febroary 2014 ary navoaka indray noho ny fifanarahana hifampizara votoaty.
“Azonao eritreretina ve ny hamaroan'ny tantara tsy hainao ny manambara azy amn'ny mahampamokatra sarimihetsika anao rehefa tsy azonao atao ny mampikasoka ny lahy sy ny vavy?” hoy ny fanontanian'i Jamsheed Akrami, tale Iraniana iray monina any Etazonia.
Tao amin'ny sarimihetsika iray antsoina hoe “Gilaneh,” ny reny iray izay mikarakara ny zanany lahy tsy afa-mihetsika no mampandro azy, mihetsiketsika mihodidina azy ary misy aza fotoana mandihy mba hampakatra ny maoraliny.
Tamin'ny 2012, ohatra, tafiditra amin'ny tantara i Asghar Farhadi rehefa nahazo Oscar tamin'ny filmany “A Separation [Fisarahana].”
Ohatra, nilaza izy fa sambany nanatrika ny Fetiben'ny Sarimihetsika Fajr tao anatin'ny efa-taona.